Sheekh Shariif: Waxaan Ka Digeyna isku Day Walba oo Dib Loogu Dhigayo Doorashada Qaranka – Goobjoog News
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed haatanna ah guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran oo ka hadlayay doorashada la filayo in sanadka soo aaddan ay dalka ka dhacdo ayaa waxa uu ka digay in dib loo dhigo doorashada qaranka.
Guddoomiye Sheekh Shariif ayaa carabka ku adkeeyay inay ka digayaan wax kasta iyo si kasta oo dib loogu dhigi karo doorashada dalka waxa uuna madaxda dalka iyaganae uga digay inay kordhistaan muddo xil heyntooda “Waxaan ka digeynaa isku day walba oo dib loogu dhigayo doorashada qaranka, iyo kordhinta muddo xileedka hey’adaha dastuuriga ah iyo madaxda qaranka”.
Dhanka kale madaxweynihii hore ee dalka ayaa sheegay inuu aad uga xunyahay in baarlamaaka Soomaaliya uu muddo bil ah dib u dhigo hadal jeedinta guddigga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka oo iyagu 27-06-2020 hor tagi doono mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah.
“Waxaan aad uga xumahay in hoggaanka baarlamanka uu muddo bil ah dib u dhigay hadal-jeedinta Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka Qaranka oo ku muddeysneyd 27-ka May” ayuu yiri guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran.
Shariif Sheekh Axmed ayaa tallabadaas muddada bisha ah dib loogu dhigay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid baalmarsan dastuurka ku meel gaarka ah ee u yaal dalka iyo sharciga doorashada ee la meel mariyay “Taallabadaas waxay xadgudub ku tahay Dastuurka KMG iyo Sharciga Doorashada Qaranka ee dhawaan la ansixiyey” wuxuu intaas ku daray in wixii ka dhasha arrintaas ay masuuliyadeeda qaadanayaan madaxda dalka.
Ugu dambeyn dowladda Farmaajo ayuu ku eedeeyay inay ku fashilantay masuuliyaddii loo dooraty oo ay ugu horeysay inay dalka gaarsiiyaan doorasho qof iyo cod ah “Dowladdan waxay ku fashilantay waajibaadkii loo doortay oo ay ugu horreysay qabashada doorasho qof iyo cod ah kuna dhacda si xor ah oo xalaal ah.
25-kii bishan guddiga joogtada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa go’aamiyey in kalfadhiga 7-aad ee baarlamaanka federaalka ah uu furmo 06-06-2020 halka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankana ay xildhibaanada hortagi doonaan 27-06-2020.